ညောင်းသည်ဟု ဆိုကာ မကြာခဏ တဂျွတ်ဂျွတ် မြည်အောင် ဇက်ချိုးတတ် သူများ သတိပြုဖွယ် – Zartiman
ညောင်းသည်ဟု ဆိုကာ မကြာခဏ တဂျွတ်ဂျွတ် မြည်အောင် ဇက်ချိုးတတ် သူများ သတိပြုဖွယ်
ကျန်တဲ့သူတွေလည်း သူမရဲ့ အဖြစ်ကို ဒီဆောင်းပါးကနေ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြဖို့ သတိပေး လိုပါတယ်…။နာတာလီခူနီကီ လို့ခေါ်တဲ့ မိန်း ကေ လးဟာ လန်ဒန်မြို့က ပရိုက်ဗိတ်ေ ဆးရုံကြီးတစ်ရုံရဲ့ လူနာတင်အရေးပေါ်ဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ေ နတာပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ သူမ နဲ့သူမသူငယ်ချင်းက အိမ်မှာ နေရင်းတီဗွီ ကြည့်နေကြတယ်။ ကြည့်နေရင်း နာတာလီ က ဘာရယ်တော့မဟုတ် သူမရဲ့ဇက်ကို ရုတ်တရက် ချိုးလိုက်တယ်။တီဗွီကြည့်ရင်း အညောင်းမိလာ လို့နေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် ချိုးလိုက်တဲ့အသံက အရင်အခေါက်တွေ ထက်တော်တော်ကျယ်တယ် ။အဲ့ဒါကို သူမလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲ။ ပြီးတော့ သူမက သန့်စင်ခန်းသွားဖို့ ထလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နာတာလီ တစ်ယောက် မတ်တပ် မရပ်နိုင်တော့ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပုံရက်သား လဲကျသွားပါတယ်။ပြန်ထမယ်လုပ်ေ တာ့ သူမရဲ့ ခြေထောက်တစ်ဘက်က လှုပ်လို့မရဘူး။ အစကတော့ သောက်တာများသွား ပြီးမူးနေတယ် ထင်လို့ အရေး ပေါ်ဌာနကို ဖုန်းမဆက်ခဲ့ပေ မယ့်ဒါဟာ အရက်ကြောင့် မဟုတ်မှန်း အရေးပေါ်ဌာန အတွေ့အကြုံတွေအရ နာတာလီ အလိုလိုသိလာခဲ့တယ်။
အရေးပေါ် ကားနဲ့ဆေးရုံရောက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူမအနေ နဲ့ တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရုတ်တရက် ဇက်ကိုချိုးချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပဲကျောရိုးနဲ့ဆက်နေတဲ့ သွေးကြောမကြီး တစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်သွားပြီးသွေး မလျှောက် နိုင်တော့ပဲ ဦး နှောက်ထဲမှာ သွေးခဲ သွားတာပါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ လေဖြတ် သွားခြင်းပါပဲ။ နာတာလီ အနေနဲ့ လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ ပါ ဘူး…လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဆေးရုံရဲ့ ကုသမှုတွေကို နာတာလီ တစ်ယောက်ခံယူနေသလို သူမဘဝ ကိုလည်းအေ ကာင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်လည်တ ည်ဆောက်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမရဲ့အြေ ခအနေဟာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ သိပ် မသေချာသလို ပြန်ကောင်းလာ ခဲ့ရင်တောင်အချိန်တွေ အကြာကြီးကြာပြီးမှ ပုံမှန် အနေအထား ကိုပြန်ရောက်မှာပါ…ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း နာတာလီတ စ်ယောက်ဘယ်လို အချိန်ကျမှ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကျိန်း သေပေါက်မပြောတတ် ကြပါဘူး …။ အဲ့တော့ အညောင်းမိပြီး ဇက်ချိုးတော့မယ် ဆိုတိုင်း နာတာလီ ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သတိရဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အမှတ်တမဲ့တစ်ခုက တစ်ဘဝလုံးစာ နောင်တတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား ?
ကျွန်တော် တို့ တော်တော်များများ ဇက်ချိုးတာ ကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ မကြာခဏ လည်း ချိုးတတ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျုတာ ရှေ့ တစ်နေကုန်တ စ်နေခမ်းထိုင်ပြီးအလုပ် လုပ်နေရသူတွေ၊ တစ်နေကုန် စာထို င်ရေးနေရသူတွေ က များသောအားဖြင့် ဇက်ချိုးတာကို လုပ်တတ် ကြတယ်။အညောင်းပြေ အညာပြေ လို့သဘော ထားကြ တာကိုး …အခုတော့ အဲ့ဒီလို အညောင်းအညြာေ ပဇက်အ ချိုး ကောင်းပြီးဘဝတစ်ခုလုံးပြော င်းလဲသွားခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတ စ်ယောက်အကြောင်ြးေ ပာချင်လို့ပါ ရေးသားလိုက်တာပါ။
ညောငျးသညျဟု ဆိုကာ မကွာခဏ တဂြှတျဂြှတျ မွညျအောငျ ဇကျခြိုးတတျ သူမြား သတိပွုဖှယျ
ကနျြတဲ့သူတှလေညျး သူမရဲ့ အဖွဈကို ဒီဆောငျးပါးကနေ သငျခနျးစာ ယူနိုငျကွဖို့ သတိပေး လိုပါတယျ…။နာတာလီခူနီကီ လို့ချေါတဲ့ မိနျး ကေ လးဟာ လနျဒနျမွို့က ပရိုကျဗိတျေ ဆးရုံကွီးတဈရုံရဲ့ လူနာတငျအရေးပျေါဌာနမှာ အလုပျလုပျေ နတာပါ။ တဈရကျမှာတော့ သူမ နဲ့သူမသူငယျခငျြးက အိမျမှာ နရေငျးတီဗှီ ကွညျ့နကွေတယျ။ ကွညျ့နရေငျး နာတာလီ က ဘာရယျတော့မဟုတျ သူမရဲ့ဇကျကို ရုတျတရကျ ခြိုးလိုကျတယျ။တီဗှီကွညျ့ရငျး အညောငျးမိလာ လို့နမှောပါ။
ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခေါကျ ခြိုးလိုကျတဲ့အသံက အရငျအခေါကျတှေ ထကျတျောတျောကယျြတယျ ။အဲ့ဒါကို သူမလညျးသိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမှုမဲ့အမှတျမဲ့ပဲ။ ပွီးတော့ သူမက သနျ့စငျခနျးသှားဖို့ ထလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ နာတာလီ တဈယောကျ မတျတပျ မရပျနိုငျတော့ပဲ ကွမျးပွငျပျေါကို ပုံရကျသား လဲကသြှားပါတယျ။ပွနျထမယျလုပျေ တာ့ သူမရဲ့ ခွထေောကျတဈဘကျက လှုပျလို့မရဘူး။ အစကတော့ သောကျတာမြားသှား ပွီးမူးနတေယျ ထငျလို့ အရေး ပျေါဌာနကို ဖုနျးမဆကျခဲ့ပေ မယျ့ဒါဟာ အရကျကွောငျ့ မဟုတျမှနျး အရေးပျေါဌာန အတှအေ့ကွုံတှအေရ နာတာလီ အလိုလိုသိလာခဲ့တယျ။
အရေးပျေါ ကားနဲ့ဆေးရုံရောကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ သူမအနေ နဲ့ တုနျလှုပျစရာဖွဈရပျမှနျကို သိခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ရုတျတရကျ ဇကျကိုခြိုးခလြိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ပဲကြောရိုးနဲ့ဆကျနတေဲ့ သှေးကွောမကွီး တဈခုလုံးပေါကျထှကျသှားပွီးသှေး မလြှောကျ နိုငျတော့ပဲ ဦး နှောကျထဲမှာ သှေးခဲ သှားတာပါ။ အကြိုးဆကျကတော့ လဖွေတျ သှားခွငျးပါပဲ။ နာတာလီ အနနေဲ့ လမျးလညျးမလြှောကျနိုငျတော့ ပါ ဘူး…လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဆေးရုံရဲ့ ကုသမှုတှကေို နာတာလီ တဈယောကျခံယူနသေလို သူမဘဝ ကိုလညျးအေ ကာငျးဆုံးဖွဈအောငျ ပွနျလညျတ ညျဆောကျနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူမရဲ့အွေ ခအနဟော ပုံမှနျပွနျဖွဈဖို့ သိပျ မသခြောသလို ပွနျကောငျးလာ ခဲ့ရငျတောငျအခြိနျတှေ အကွာကွီးကွာပွီးမှ ပုံမှနျ အနအေထား ကိုပွနျရောကျမှာပါ…ဆရာဝနျတှအေနနေဲ့လညျး နာတာလီတ ဈယောကျဘယျလို အခြိနျကမြှ ပုံမှနျပွနျဖွဈမလဲ ဆိုတာ ကြိနျး သပေေါကျမပွောတတျ ကွပါဘူး …။ အဲ့တော့ အညောငျးမိပွီး ဇကျခြိုးတော့မယျ ဆိုတိုငျး နာတာလီ ရဲ့ ဖွဈရပျကို သတိရဖို့လိုပါတယျ။ တဈခါတဈလေ အမှတျတမဲ့တဈခုက တဈဘဝလုံးစာ နောငျတတှဖွေဈသှားနိုငျတယျမဟုတျလား ?
ကြှနျတျော တို့ တျောတျောမြားမြား ဇကျခြိုးတာ ကို လုပျတတျကွတယျ။ မကွာခဏ လညျး ခြိုးတတျကွတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကှနျပြုတာ ရှေ့ တဈနကေုနျတ ဈနခေမျးထိုငျပွီးအလုပျ လုပျနရေသူတှေ၊ တဈနကေုနျ စာထို ငျရေးနရေသူတှေ က မြားသောအားဖွငျ့ ဇကျခြိုးတာကို လုပျတတျ ကွတယျ။အညောငျးပွေ အညာပွေ လို့သဘော ထားကွ တာကိုး …အခုတော့ အဲ့ဒီလို အညောငျးအညွာေ ပဇကျအ ခြိုး ကောငျးပွီးဘဝတဈခုလုံးပွော ငျးလဲသှားခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးတ ဈယောကျအကွောငျွးေ ပာခငျြလို့ပါ ရေးသားလိုကျတာပါ။